ရထားဖြင့်ဗြိတိန်နိုင်ငံက - 8 တွင်ထိုအ Off-Track သိကောင်းစရာများ | တစ်ဦးကရထား Save
နေအိမ် > ဗြိတိန်နိုင်ငံခရီးသွားရထား > ရထားဖြင့်ဗြိတိန်နိုင်ငံက - 8 တွင်ထိုအ Off-Track သိကောင်းစရာများ
ရထားဖြင့်ဗြိတိန်နိုင်ငံက - 8 တွင်ထိုအ Off-Track သိကောင်းစရာများ
ယင်း၏လူမှုရေးသြဇာလွှမ်းမိုးမှုသည့်တစ်ဦးအပေါများရထားလမ်းကွန်ယက်ကိုအားဖြင့်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာဗြိတိန်ရဲ့ သမိုင်း သားစဉ်မြေးဆက်အဘို့နှင့်စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု.
တဖန်သင်တို့တစ်နေလျှင် ရထားလမ်းဝါသနာအိုး, တစ်ဦးကိုဗြိတိန်ရထားလမ်း အားလပ်ရက်များ တည်နေရာမှာစိတ်ဝင်စားဖွယ်လှုပ်ရှားမှုများအနေဖြင့်လမ်းခရီးတရှောက်လုံးနိုင်အောင်စီစဉ်ပေးထားတယ် Aberdeen Penzance မှ.
ဒါကြောင့်သင့်ရဲ့နှလုံးရထားဗြိတိန်နိုင်ငံကိုမြင်လျှင်အပေါ် set ရဲ့လျှင်, ဤနေရာတွင်ခုနစျပါးအပျေါဖြစ်ကြပြီး Off-လမ်းကြောင်းအကြံပေးချက်များ.
Glasgow ဗဟိုဘူတာသွားရောက်လည်ပတ် တစ်ဦးမဖြစ်မနေဖြစ်ပါသည် - မသာကစကော့တလန်ရဲ့ရန်သင့်အားချိတ်ဆက်ပါလိမ့်မယ် သာယာလှပပျော်မွေ့, ဒါပေမယ့်လည်းရှိပါတယ် 91 စောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့ကပို့ဆောင်ရေးအာရုံစိုက်ခြင်းမှရာခိုင်နှုန်းကိုခွင့်ပြုချက်မှုနှုန်း, ဘူတာရုံ မာစတာရှင်ပေါလုလီယွန်လေးခရီးစဉ်တစ်ရက်ပြေးက၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်ဘီဘီစီတီဗီစီးရီးအတွက်သရုပ်ဆောင်.
ဘာမင်ဂမ်နယူးလမ်းသည်ဖောက်သည်ကျေနပ်မှုမြင့်မားသည့်အခြားဘူတာရုံတစ်ခုဖြစ်သည်. West Midlands မှာလည်းရထားလမ်းအချက်အချာအပြည့်အဝအတွက် redeveloped ခဲ့သည် 2015 နှင့်တစ်ဦးရွေးချယ်မှုဂုဏ်ယူ အေးမြစားသောက်ဆိုင်, အိမ်တွင် Five Guys ဘာဂါပူးတွဲပါ ၀ င်သည်.
အဘယ်သူမျှမအစစ်အမှန်ရထားလမ်းဝါသနာအိုးနှိုက်နှိုက်ချွတ်ချွတ်လန်ဒန်ရဲ့ King ရဲ့လက်ဝါးကပ်တိုင်ဘူတာရှာဖွေစူးစမ်းခြင်းမရှိဘဲဗြိတိန်နိုင်ငံကစွန့်ခွာလိမ့်မည်ဟု. ဒါဟာ King ရဲ့လက်ဝါးကပ်တိုင်မှလာမယ့်ဖွင့် စိန့် Pancras မြေအောက်ဘူတာ, Regents ရဲ့နီးကပ် ပန်းခြံ နှင့်ဗြိတိသျှစာကြည့်တိုက်, နှင့်ဆန်းကြယ်မှုများပလက်ဖောင်းမှအိမ်9¾, အဆိုပါများအတွက်ထွက်ခွာအမှတ် Hogwarts Express ကို - ကဆိုပါတယ်အလုံအလောက်.
ရထား app ကို Raildar ဗြိတိန်နိုင်ငံအပေါ်တိုင်းရထား၏တိုက်ရိုက်မြေပုံ features ရထားလမ်းကွန်ယက်ကို - ထိုပြောင်းလဲနေသောဗားရှင်းပင်ရထားန်းကျင်ရွေ့လျားပြသ. ဤသည်ရထားကိုနှစ်သက်မယ့်စိတ်ကူးယဉ် app ကိုလည်းပါဝင်သည် လမ်းကြောင်းအပြင်အဆင်များနှင့်လမ်းဆုံမြေပုံ - အဘယ်အရာကိုတစ်အံ့သြဖွယ်စိတ်ကူး!
သငျသညျရထားလမ်း-related စာဖတ်ခြင်း riveting ပြီးနောက်ဆိုရင်, စင်ပြိုင် Lines စာရေးသူမှ Ian Marchant မှာမဲ့ကြည့်ယူရှုမြင် 175 ရထားနှင့်အတူဗြိတိန်ရဲ့စွဲလမ်းနှစ်. စိတ်အားထက်သန်မှုနှင့်ဟာသနှင့်အတူရေးသား, ကသို့အနေနဲ့တကယ်ကိုလှုံဆော်အားပေးထိုးထွင်းသိမြင်မှုဖွင့် ဗြိတိန်ဇာတ်ကောင်နှင့်ယဉ်ကျေးမှု.
6. စစ်မှန်သောနိူးများအတွက် Reading
နှောင်းပိုင်းမှာတော့ 19ကြိမ်မြောက် စောစော 20ကြိမ်မြောက် ရာစုနှစ်များစွာ, ဂျော့ခ်ျ Bradshaw ရဲ့ရထားလမ်းလမ်းညွှန်များမိမိတို့၏နေ့၏ apps များဖြစ်ကြသည်နှင့်အပေါ်နောက်ဆုံးပေါ်သတင်းအချက်အလက်များပေး မီးရထားလမ်းကြောင်းများ ဗြိတိန်နိုင်ငံတစ်ဝှမ်းနှင့်တိုက်ကြီးတွင်ဥရောပတလွှား. အဆိုပါ ဧပြီလ 1910 လမ်းညွှန်သည်ဗြိတိန်နိုင်ငံ၏ရထားလမ်းကွန်ယက်၏အမြင့်ဆုံးတောင်ထိပ်တွင်ရေးသားခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးမီးရထားလမ်းအတွက်သမ္မာကျမ်းစာဖြစ်လာသည်။.
အခမဲ့သို့မဟုတ်စျေးနှုန်းသင့်တင့်သောအင်တာနက်ကို UK ရထားလမ်းကြောင်းများနှင့်မြို့လယ်ခေါင်များတွင်အလွယ်တကူရနိုင်သည်, သင့်ရဲ့လျှင်ဒါ ခရီးစဉ်တစ်ဦးမဟုတ်တော့၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည် တည်းခိုခြင်းငှါ,, အွန်လိုင်းမှဒီဂရီများအတွက်လေ့လာနေ Anglia Ruskin အဝေးသင်သင်ယူ၏အကြိုက်နှင့်အတူမပြတ်မတောက်ဆက်လက်နိုင်ပါတယ်. သင်တို့ပတ်လည်လှိမ့်နေစဉ်နှင့်ကွဲပြားခြားနားသောနိုင်ငံများရှိအတန်းဖော်မှ chatting အကြောင်းကိုဘဝ-အတည်ပြုတစ်ခုခုရှိမယ့် ကမ်းရိုးတန်း နှင့် clifftops တလွှား.
သငျသညျဘယ်တော့မှမေ့လိမ့်မယ်ဗြိတိသျှရထားလမ်းအားလပ်ရက်ဤခုနစ်ပါးသောအပေါ်နဲ့ off-လမ်းကြောင်းအကြံပေးချက်များကိုလိုက်နာပါ - ဘူတာရုံမှာသင်မြင်.
သငျသညျရထားလမ်းခရီးသွားများအတွက်အကြံပြုချက်များရှိသည် Do? မှတ်ချက်များအပိုင်း၌၎င်း, သငျသညျဆိုပါကသူတို့ကို Share ရထားလိုအပ်ပါတယ် – တစ်ဦးကရထား Save.
သင်သည်သင်၏ site ကိုပေါ်ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘလော့ဂ်ပို့စ် embed လုပ်ဖို့ချင်ပါနဲ့, သင်တို့သည်ငါတို့၏ဓါတ်ပုံနှင့်စာသားယူနိုင်ပါတယ်ဖြစ်စေနဲ့ ကိုယ့်ကိုလင့်ခ်နှင့်အတူခရက်ဒစ်ပေး ဤ blog post မှ, သို့မဟုတ်သင်ဒီနေရာကိုနှိပ်ပါ: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fbritain-by-train-8-on-and-off-track-tips%2F%3Flang%3Dmy - (အဆိုပါ Embed Code ကိုကြည့်ဖို့အနည်းငယ်အောက်ကိုဆင်း)
#ယူကရိန်း ဗြိတိန် နေပြည်တော် လက်ရန်းတန်း ရထားလမ်း eng
ဗြိတိန်နိုင်ငံခရီးသွားရထား, ပြင်သစ်ခရီးသွားရထား, ရထားခရီးသွားဟော်လန်, ရထားခရီးသွားစပိန်, ခရီးသွားလာရေးသိကောင်းစရာများရထား